Qaar ka mid ah Wadamada Caalamka oo galay xaalad deg deg ah oo ka dhan ah Viruska Corona. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qaar ka mid ah Wadamada Caalamka oo galay xaalad deg deg ah...
Qaar ka mid ah Wadamada Caalamka oo galay xaalad deg deg ah oo ka dhan ah Viruska Corona.
In kasta oo mas’uuliyiinta Shiinuhu ay caddeeyeen inay qaadeen dhammaan tallaabooyinka lagu xakameyn karo Virus-ka Corona isla markaana looga hor tago faafitaankiisa, ayaa waxay sheegeen inuu dhibaato xoog leh geysanayo cudurku, isla markaana uu si deg deg ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda iyo adduunka intiisa kaleba.
Dalal badan oo adduunka ah ayaa xaalad deg deg ah geliyay dalalkooda, waxay sidoo kale bilaabeen inay shaqaalohooda ama muwaadiniintooda kala soo baxaan gudaha Shiinaha, sidoo kale waxay sameeyeen inay dalalkooda ka masaafuriyaan muwaadiniinta u dhashay dalka Shiinaha.
Dawladda Ingriiska ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku go’aansatay inay ka saarto safaaradda ay ku leedahay dalka Shiinaha qaar kamid ah shaqaalaheeda oo u dhashay dalkaasi Shiinaha, waxay sidoo kale bilowday inay muwaadiniinteeda ku celiso dalka Ingiriiska si ay uga bedbaadaan Viruska Corona.